Maalinta: Noofambar 19, 2018
Degmada Kanton City waxay ka qayb gashay Bandhigga Bandhiga Aklim Smart Technologies Fair
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay kaqeyb gashay Bandhig Faneed Aqoon kororsi Casri ah oo ay soo qaban qaabisay ASKON. 14-15 Smart Future Expo, oo lagu qabtay Xarunta Shirarka Istanbul ee Noofembar 2018 [More ...]
Unkapanı, Galata iyo Halic Metro Bridges ayaa la furi doonaa Habeenkii Marine Traffic
Galata Bridge, Atatürk (Unkapanı) Bridge iyo Haliç Metro Bridge ayaa loo furi doonaa taraafikada badda caawa. Buundada Galata, Atatürk (Unkapan Bridge) Buundada iyo Hali Bridge Metro Bridge, iyadoo la raacayo go'aanka UKOME 20 November 2018 Tuesday [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ayaa sheegay tirada rakaabka ee ku soo dhowaanaya 44 milyan, "Ankara-Sivas Tareenka Xawaare Xawaare ku dhow dhamaadka." Ayuu yidhi. Yeni Hiigsi Cusub ee Dhaqanka iyo Dalxiiska ” [More ...]
Kahramanmaraş, oo xafideysa magaceedii hore ee magaalada oo ay la socoto qiimaheeda taariikhiga ah iyo dhaqankeeda, ayaa sidoo kale dhaqso ugu dhaqaaqeysa sidii ay u noqon laheyd Smart City, Dowlada Hoose ee Magaalada Kahramanmara continuesna waxay sii wadaysaa howlaheeda si ay u siiso adeegga ugu wanaagsan bulshada. [More ...]
Madaxweynaha Toçoğlu, oo martigaliyay Fatih Çintimar, Madaxweynaha Xiriirka Ciyaaraha, ayaa yiri, “2020, waxaan ku marti qaadi doonaa World Mountain Bike Marathon Championship ee Sunflower Valley iyo Baaskiilka Baaskiilka. Waxaan ku rajo weynahay in ay hoy u noqoto tartamada qaran iyo kuwa caalamiga ah [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Mustafa Celik, Erciyes wuxuu gacan ka geysan karaa magaaladeena dhaqaalaheena wadankuna wuxuu sii wadaa inuu dardar galiyo dadaallada lagu gaabinaayo, ayuu yiri. Hawlahaas kor u qaadista ah darteed, Madaxweyne Celik [More ...]
RayHaber 19.11.2018 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 19.11.2018 ee nidaamkayaga.
Waqtiga Taageerada TÜDEMSAŞ
Abdullah Peker, Gudoomiyaha Ururka Xuquuqda Shaqaalaha Gaadiidka, ayaa sameeyay bayaan uu ku taageerayo Agaasinka Guud ee TÜDEMSAŞ. Madaxweyne Peker qoraalkiisa saxaafadeed ee qoran: Doorashooyinka Maxalliga ah [More ...]
Kayseri Gaadiidka Inc. 500 Noocyada dhirta oo leh dhul
Gawaarida Kayseri Inc. ee ku dhextaal Dowlada hoose ee Magaalada Kayseri. Wuxuu sameeyay 4 ee Bandhig Dhaqameedka Dhaqameed ee Degmada Kocasinan. Gaadiidka Kayseri Inc. shaqaalaha waxay ku biireen qoysaskooda. Gaadiidka caadiga ah ee Gaadiidka Kayseri Inc. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Sivas ayaa soo gabagabeynaya dhamaadka warkan. Wasiirka Turhan, Turkey u dhaqaaqdo la mesh bir ah tolida sannadihii dheer ka dib dib-u-sheegaya in iyagu bilaabay, sida [More ...]
Maxay IDO u joojisay duulimaadyada gudaha?
Basaska Badda Istanbul (IDO), oo dhowaan dhimay tirada duullimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, 1 waxay gabi ahaanba xireysaa duulimaadyada gudaha ee Istanbul illaa Disember. Shirkaddu waxay awood u leedahay inay lacag ka hesho qaar ka mid ah maraakiibteeda [More ...]
Eedaynta musuqmaasuq ee gegada diyaaradaha ee gegada diyaaradaha ee cusub ee galka dayax gacmeedka iyo gaarsiinta gundhigga qandaraaska ayaa horey loo siisii ​​dhigay. Özlem GÜVEMLİ'nin SÖZCÜ'den sida lagu sheegay warbixinta, milkiilaha la sheegay in xubin ka ah CHP ee baarlamaanka Tariq Balyali, shirkadaha basaska 130 [More ...]
Taariikhda la bilaabayo tareennada rakaabka, oo aan shaqeyneyn shan sano halkaasoo malaayiin rakaab ah laga xayiray xaqa gaadiidka, ayaa dib loo dhigay mar kale. Wadista imtixaanka ayaa dhawaan la shaaciyey laguna dhawaaqay dhamaadka sanadka 2018. [More ...]
Dastuurka Qabyada ah ee Diyarbakır-Mardin Dacwad-oogaha Maxkamadda!
Qandaraas ayaa loo qabtay dhismaha 53km ee khadadka cusub ee tareenka Diyarbakır-Mardin. 384 milyan 733 kun ginni oo ku jirta qandaraaska ugu hooseeya qandaraaska 380 milyan 615 kun ginni, in kasta oo qandaraaska la qabtay [More ...]